တရုတ်ပြည် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးဖြစ်လာနည်းလမ်း | How China BecameaWorld Power! | Real Conversion
(ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး တရားဒေသနာ# ၈၈)
(ကမျဘာဦး ကမျြး အပေါ် # 88 တရားဟောခကျြ)
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၇ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ "ဘုရားသခင်သည်လည်း နောဧနှင့်သူ၏သားတို့ကို ကောင်းကြီးပေး တော်မူ၍၊ သင်တို့သည် များပြားစွာမွေးဘွားလျက် မြေကြီးကို ပြည့်စေ ကြလော့။"(( ကမ္ဘာဦး ၉း ၁ ) )
ယနေ့တွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို အသင်းတော်တွင် ကျင်းပကြပါသည်။ တရုတ်နှစ် သစ်ကူးဟူသည်မှာ အရေးကြီးသည့် တရုတ်ရုံးပိတ်ရက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထီးနန်းဆက်ဆံသူ ဟွမ် တီက ပထမဆုံးပြက္ခဒိန်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အချိန်မှစ၍ ခရစ်တော်မပေါ်မှီ လွန်ခဲ့သောနှစ် နှစ်ထောင်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပါသည်။ အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်ကဲ့သို့ပင် တရုတ်ပြက္ခဒိန်သည် နှစ်တိုင်းရေတွက်ရပါသည်။ သို့သော် အနောက်တိုင်းနှင့်မတူဘဲ တရုတ်ပြက္ခဒိန်သည် လခြမ်း ကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြေကြီးသည် တစ်နှစ်လျှင် နေကို တစ်ခါပတ် သည်။ ၎င်းက ရာသီဥတု၊ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း၊ နွေအကူးတို့ဖြစ်စေသည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးသည် မြေကြီးကိုပတ်၍လ၏အခြမ်းပေါ်အခြေခံ၍ ရှိထားသည်။ လသည် မြေကြီးကိုပတ်သည်မဟုတ်။ သို့သောကြောင့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးသည် မတူညီသော နေ့ရက်များတွင် နှစ်တိုင်းကျင်းပကြသည်။ ယင်းသည် ဂျူးလူမျိုးများ၏ ပသခါပွဲတော်၊ ခရစ် ယာန်ဘာသာတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအစပြုသော အခါ ဇန်နာဝါရီနောက်ဆုံးပိုင်းနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ဤတရုတ်နှစ်သစ် ကူးသည် မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်နေကျအ တိုင်းဆိုရလျှင် ပွဲသည် နေရက်ပေါင်းများစွာဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် နှစ်သစ်ကျင်းပရန် သင့် လျော်ပါသည်။
ပြည့်စုံသောတရုတ်နှစ်သစ်ကူးက အပတ်ပေါင်းများစွာတွင် နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကြာ မြင့်ပြီး ဆယ့်နှစ်နှစ်တစ်ခါစီ ငါးပတ်လည်သည်။ တရုတ်ပြက္ခဒိန်သည် ပြန်လည်မွေးဖွါးလာခါ ဆယ့်နှစ်နှစ်တွင် တစ်ခုစီ နာမည်ပေးထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျွတ်၊ နွား၊ ကျား၊ ယုန်၊ နဂါး၊ မြွေ၊ မြင်း၊ သိုး၊ မျောက်၊ အိပ်တန်းငှက်၊ ခွေး၊ နှင့်ဝတ် စသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ( အေဒီ ၂၀၁၆ ) သည် မျောက်နှစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူးပုံသဏ္ဍာန်သည် တရုတ်လွှမ်းမိုးသည့်နိူင်ငံများဖြစ်ကြ သော ကိုးရီးယား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ မွန်ဂိုလီယား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလိပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်ဝင်၊ တရုတ်တည်ရှိရာနေရာဒေသများတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၈၇၃ ခုနှစ်အထိ ဂျပန်တွင်လည်းကောင်း၊ ဂျပန်လူမျိုးများက ဂျပန်က အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်ကို ရွေး ချယ်မွေးစားလိုက်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
တရုတ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးလူမျိုးထဲက တစ်မျိုးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်တွင် အခြားနိူင်ငံထက် လူများစွာရှိကြသည်။ ၁.၄ သန်းကျော်နေထိုင်ကြသည်။ အမေ ရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် လေးဆလောက်များပြားသည်။ တရုတ်သည် နိူင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ စစ်ရေးအင်အားကြီးနိူင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နှင့်အနောက်တိုင်းတို့၏ကျဆင်းမှုကြောင့် တရုတ်သည် ကမ္ဘာကြီးကို ဦးဆောင်သည့်နိူင်ငံဖြစ်လာနိူင်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က တရုတ်ပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်ဝိညာဉ်ရေးရာနိူးထမှု ကြီးအကြောင်းကို ပြောသည်။ ခရစ်တော်မတိုင်မှီ နှစ်ပေါင်းခုနှစ်ရာတွင် ခရစ်တော်က "ကြည့် ရှုလော့။ ဤသူတို့သည် ဝေးသောအရပ်မှလာကြလိမ့်မည်။ ကြည့်ရှုလော့။ ထိုသူတို့သည် မြောက်မျက်နှာ အနောက်မျက်နှာမှ၎င်း၊ ထိုသူတို့သည်လည်း၊ သိနှိမ်ပြည်မှ၎င်း လာကြလိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။" (ဟေရှာယ ၄၉း ၁၂ ) ပရောဖက်ပြုချက်မှာ တရုတ်ပြည်တွင် ခရစ် ယာန်ဘာသာထွန်းကားလာခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံလာခဲ့ပြီ။ ယခုတွင် တရုတ်ပြည်၌ သန်းပေါင်း ၁၃၀ ခန့် ခရစ်ယာန်များရှိလာကြပြီ။ "သိနှိမ်"ဟူသည်မှာ တရုတ်ပြည်၏ရှေးခေတ်နာမည်ဖြစ် သည်။ ဒေါက်တာ ဟန်နရီ အမ် မိုရိစိနှင့် အခြားပညာရှင်များက "သိနှိမ်ပြည်" ကို တရုတ်ပြည် ဟု ယုံကြည်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ (The Defender's Study Bible ၊ ဟေရှာယ ၄၉း ၁၂ မှတ် စု ) ပရောဖက်ပြုချက်သည် ယနေ့ပြည့်စုံလာပြီ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်လည်း ဘုရားကျောင်းသွား သည့်အရေအတွက်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပ နှင့် အခြားပေါင်းစပ် နိူင်ငံများထက် သာ၍ များနေသည်။ တရုတ်လူငယ်များသည် ဘုရားကျောင်းသို့ လာနေကြပြီ။ အချို့က ခရစ်တော်ကို လက်ခံကြသဖြင့် သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။
ခရစ်တော်တွင် ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါသည်။ နိူင်ငံသားဟူသည် ခရစ်တော်မပေါ် မှီ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်က ဇိုင်ယာမင်းလက်ထက်တွင် တရုတ်ပြည် မြစ်ဝါမြစ်နား၌ စတင်ခဲ့ သည်။ တရုတ်နိူင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည် ရှိုင်မင်းလက်ထပ်ဖြစ်သော ခရစ်တော်မတိုင်မှီ ၁၆၀၀ တွင် ပိုမိုထွန်းကားလာခဲ့သည်။
နောဧခေတ် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်တွင် တရုတ်ပြည်၌ နေထိုင်သောလူများရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် စီရင်တော် မူခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ရေတစ်ခုလုံးက လွှမ်းခြုံထားသည်။ နောဧနှင့် ၎င်း၏မိသားစုသားလျှင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းထဲက သင်္ဘောထဲက လွတ်မြောက်သည်။ ရေသည် ပြန်လည်လျော့လာသည်။ နောဧနှင့်မိသားစုသည် သင်္ဘောထဲက ထွက်လာကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ကမ္ဘာဦး ၉း ၁ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ Scofield Study Bible ၏အပိုဒ် ၁၆ တွင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အား "များပြားစွာမွေးဖွါးကြလော့၊ မြေကြီးကို ပြည့်၍ စေကြလော့" ဟု ကောင်းကြီးပေး ထားသည်။ ( ကမ္ဘာ ၉း ၁ )
"ဒါအမှန်ပဲလား" ဟု လူတစ်ဦးသည် အံ့ဩလိမ့်မည်။ ဒါဟာ တရုတ်သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား။ လူရှစ်ဦးကနေ သန်းပေါင်းများစွာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းနှစ် သို့မဟုတ် သုံးရာ အတွင်း အဘယ်သို့တိုးပွါးလာနိူင်သနည်း။ သို့ဖြင့် လူတို့သည် တရုတ်ပြည်၊ အိန္ဒီယပြည်၊ အီ ဂျစ်၊ နှင့်အခြားနေရာများ" တွင် တည်ဆောက်ထားကြသလား ဆိုသည်ကိုလည်း အံ့ဩမိကြ သည်။ ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကို ဒီနံနက်ပေးချင်ပါသည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီတွင် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို စဉ်းစား ကြပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး မိဘများအား "များပြားစွာမွေးဖွါးကြလော့၊ မြေကြီးကို ပြည့်၍စေကြလော့" (ကမ္ဘာဦး ၁း ၂၈ ) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား သားသမီးမွေးဖွါးစေလိုပြီး မြေကြီးကို ပြည့်စေလိုကြသည်။
အာဒံနှင့်၎င်း၏မျိုးဆက်များသည် မြေကြီးကို ပြည့်စေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူတို့ သည် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ သို့မဟုတ် ၉၀၀ လောက် အသက်ရှင်ကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် လည်း ယခုအချိန်ထက် ကောင်းမွန်သည်။ မြေကြီးသည် ရေထုဖြင့်လွှမ်းမိုးထားပြီး ထိုအရာက အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ မိုးမရှိ။ မြေကြီးပေါ်မှ ရေငွေ့သာတက်သွားပြီး မြေကြီးမျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံးကို ရေဖြစ်စေသည်။" ( ကမ္ဘာဦး ၂း ၆ ) အိမ်စိမ်းကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ နေထိုင်လို ဖွယ်ရာနေရာကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။ အပင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များသည် ကြီးထွားလာ သည်။ လူတို့လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့သည် နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ အထက်တွင် အ သက်ရှင်ရကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက "အာဒံသည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာသုံးဆယ်စေ့သော် သေလေ၏" ဟုဆိုသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၅း ၅ )
သို့သော် အာဒံသည် ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုသည်။ လူသားမျိုးနွယ်စုများကြားတွင် အပြစ် နှင့်သေခြင်းကို ဆောင်ယူလာသည်။ ထို့ကြောင့် အာဒံ၏ပထမဆုံးသားဖြစ်သူသည် ဦငယ်ကို သတ်ခဲ့သည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၄း ၈ ) ဘုရားသခင်က "မြေကြီးပေါ်မှာ ပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ် လည်ရသောသူဖြစ်ရလိမ့်မည်" ( ကမ္ဘာဦး ၄း ၁၂ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ သူသည် အရှေ့ပြည် နောဒပြည်သို့ထွက်သွားရသည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၄း ၁၆ ) "နောဒပြည်" ဟုဆိုရာတွင် "လှည့်လည် ရသောမြေ" ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ဒေါက်တာ M. R. DeHaan က "ထုံးတမ်းစဉ်လာသည် သူသည် အိန္ဒီယပြည်၊ တရုတ်ပြည် နှင့်အခြားနေရာများဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ (The Days of Noah; Zondervan, ၁၉၇၁၊ စာ- ၃၃ ) သူသည် မိဘများနှင့်ဝေးရာတွင် မြို့ကိုတည်တော် မူခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၄း ၁၇ )
ကိုင်သည် အဝေးသို့ထွက်ပြေးရသည်။ အာဗေလသည် သေသွားသည်။ အာဒံနှင့်ဧ၀ သည် ရှေသဟူသောအမည်ရှိလူတစ်ဦးကို ထပ်၍မွေးဖွါးသည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၄း ၂၅ ) သူတို့သည် "သားသမီးများကို မြင်ကြသည်။" (ကမ္ဘာဦး ၅း ၄ ) သူ၏အသက် ၉၃၀ တွင် အာဒံသည် သားသမီးများစွာကို မွေးဖွါးသည်။ ယုဒထုံးတမ်းဓလေ့အရ အာဒံနှင့်ဧဝသည် သားသမီး ၅၆ ယောက်ရရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ရှေသသည် နှစ်ပေါင်း ၉၁၂ နှစ်အသက်ရှင်သည်။ သူသည် "သားသမီးများကို မြင်ရ သည်။" (ကမ္ဘာဦး ၅း ၇၊ ၈ ) ရှေသ၏သား ဧနောက်သည် ၉၀၅ နှစ်အသက်ရှင်သည်။ "သားသမီးများကို မြင်ရသည်။" (ကမ္ဘာဦး ၅း ၁၀၊ ၁၁ ) ဧနောက်၏သား ခါနန်သည် ၉၁၀ အ အသက်ရှင်သည်။ "သားသမီးများကို မြင်တွေ့ရသည်။" ( ကမ္ဘာဦး ၅း ၁၃၊ ၁၄ ) ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၏အခန်းကြီးငါးက ထိုအချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်ခဲ့သော လူများ၏နာမည်နှင့်အသက်ကို ပေးထားသည်။ အများစုသည် နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်အသက်ရှင်ကြသည်။ သူတို့သည် သားသ မီးများကို မွေးဖွါးကြသည်။ လူသားမျိုးနွယ်သည် မြေကြီးပေါ်တွင် ပြည့်လျက်နေကြသည်။
ဤသည်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ရေထဲပါသွားကြ သည်။ သူတို့သည် ကမ္ဘာကြီး၏ကြီးစွာသောအစိတ်ပိုင်းများတွင် မျှောပါ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်တူညီမှုရှိပါသည်။ ရေသည် မြေကြီးတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးသည်။ အကြောင်းမှာ လူတို့သည် မြေကြီးတစ်ခွင်လုံးကို လွှမ်းမိုးကြသည်။
သူတို့သည် အပြစ်သားကဲ့သို့ မြေကြီးကို ပြည့်စေကြသည်။ "မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ် ကြီး၍ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိ ကြောင်းကို ဘုရားသခင်မြင်တော်မူလျှင်" (ကမ္ဘာဦး ၆း ၅ ) ဟုဆိုပါသည်။ "မြေကြီးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာ ပုတ်စပ်လျက်ရှိ၏။ အဓမ္မအမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏။" (ကမ္ဘာဦး ၆း ၁၁ )
ဘုရားသခင်သည် လူသားကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် တရားစီရင်တော်မူသည်။ ရေ သည် မြေကြီးကို ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်လွှမ်းမိုးထားသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၇း ၂၄ ) နောဧနှင့်သူ၏ မိသားစု၊ ၈ ဦးသာလျှင် သင်္ဘောထဲတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရကြသည်။ ကျန်သောသူများ သည် ငရဲထဲသို့နစ်မြှုပ်သွားခဲ့ကြသည်။ ရေသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသည်။သင်္ဘော သည် အာမေးနီးယားနိူင်ငံရှိ အာရရတ်တောင်းပေါ်တွင် တင်ကျန်သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၈း ၄ ) နောဧနှင့်မိသားစုသည် သင်္ဘောထဲကထွက်လာသောအခါ ဘုရာသခင်က သူတို့အား "များပြား စွာမွေးဖွါးကြလော့။ မြေကြီးကို ပြည့်စေကြလော့" ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၉း ၁ )
ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ပေးထားသော အမိန့်တော်ပင်ဖြစ် သည်။ လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအရာလည်းဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် စုံတွဲတွင် ကလေးသူငယ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ သာရှိကြသည်။
မတ်တပ်ရပ်ပြီး "ငါ့ဝိညာဉ်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ကို ချီးမွမ်းကြပါကုန်စို့" သီဆိုကြရ အောင်။
အိုငါ့ဝိညာဉ်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ကို ချီးမွမ်းပါ။ သူသည် သင့်အား ကျွေးမွေးတော်မူ၊
ရွေးနှုတ်ခဲ့၊ အနာငြိမ်းစေ၊ အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တည်စေ၊ ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းခြင်းလိုအပ် ပါသလော။
ချီးမွမ်းပါ၊ ချီးမွမ်းပါ၊ ထာဝရဘုန်းကြီးဘုရင်ကို ချီးမွမ်းပါ။
("ငါ့ဝိညာဉ်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ကို ချီးမွမ်းလော့၊” ဆာလံ ၁၀၃ မှ၊
Henry F. Lyte, ၁၇၉၃- ၁၈၄၇).
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန့်နှံ့ဖို့လွယ်ကူပေမည်။ မိုးလေဝသသည် ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက် ပို၍ အေးလာသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ဤအချိန်ကာလကို "ရေခဲကာလ" ဟု ခေါ်သည်။ ရေအ များတို့သည် ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားသည်။ တောင်တို့သည် တွန်းထုတ်ခြင်းခံရသည်။ ပင်လယ်သည် ပျက်စီးသွားသည်။ အာရှမှသည် တောင်အမေရိကတိုင်အောင် ဖြတ်လျှောက်သွားသည်။ ရုရှ နှင့် အလကာတို့စပ်ကြားတွင် နောက်ပြန်လျောသွားသည်။ ရုရှနှင့်အာလကာကြားတွင် ကုန်းမြေတံတားရှိသည်။ သပ္ပံပညာရှင်များက အာလကာမှ တောင်အမေရိကတိုင်အောင် "အိန္ဒီယလူမျိုးများ" တို့သည် တရုတ်လူမျိုးများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟု ပြသကြသည်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာ သို့မဟုတ် သုံးရာအတွင်း မြေကြီးကို ပြည့်စေရန် လွယ်ကူသည် အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသည်။ လူတို့သည် ကမ္ဘာကြီး၏ပထဝီအနေအထားကို သိနှင့်ကြ သည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီတွင် မြေကြီးဖွဲ့စည်းပုံကို သိခဲ့ကြသည်။ ဘိုးဘေးတို့သည် အိန္ဒီယ၊ တရုတ်ပြည်တို့တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်အရပ်သို့သွားရမည်ကို သိကြသည်။
မြေကြီးကို နောက်တဖန်ပြည့်စေရန်မှာ လွယ်ကူသည်။ ဖြစ်သင့်သည်ထက် ကြာရှည် ပေမည်။ နောက်တွင် အနည်းငယ်ရှင်းပြမည်။ သို့သော် လူတို့သည် ကွဲပြားလာသောအခါ သူတို့သည် မြေကြီးကို လျှင်မြန်စွာပြည့်စေကြပါသည်။ နောဧ၏သားများဖြစ်ကြသော ရှေမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၁၀း ၁ ) ရှေမသည် ဆယ်မက်တစ်လူမျိုးဖြစ်လာပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အာဗြဟံသည် ရှေမအမျိုးထဲက ဆင်းသက်လာ သည်။ သူ၏သားအားဖြင့် အာဗြဟံသည် ယုဒလူမျိုးတို့၏အဘဖြစ်လာသည်။ ဏ္ဍရှမေလအား ဖြင့် အာဗြဟံသည် အာရပ်တို့၏အဘဖြစ်လာသည်။ ယုဒနှင့်အာရပ်တို့နှစ်ဦးလုံးသည် ဆယ်မက်တစ်လူများဖြစ်ကြသည်။
ရှေမ သည် ဥရောမနှင့်အာရှသားတို့၏အဘဖြစ်သည်။ သူ၏သားတစ်ဦးမှာ ဂေါမဖြစ် သည်။ အနောက်တိုင်းတို့၏ ဖခင်လည်းဖြစ်သည်။ အခြားသားတစ်ယောက်မှာ ဂေါဂ၊ ရုရှနှင့် ယူကရိန်းတို့၏အဘဖြစ်သည်။ ရှေသ၏မြေးတစ်ယောက်မှာ စပိန်နိူင်ငံသားတို့၏အဘဖြစ် သည်။ တရုတ်တို့သည် ရှေသအမျိုးထဲက ဆင်းသက်လာကြသည်။
ဟာမသည် ဟာမီတက်လူမျိုးတို့၏အဘဖြစ်သည်။ အာဖရိကလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ဟာမ၏သားတစ်ယောက်မှာ မိဇရိဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာဦ ၁၀း ၆ ) သူ၏ဟေဗြဲနာမည်မှာ အီဂျစ် အတွက်ဖြစ်သည်။ အာဖရိက၏ပထမဆုံးနိူင်ငံတွင် လူတို့ရောက်ရှိကြသည်။
နောဧ၏မျိုးဆက်များသည် အချိန်တိုအတွင်း မြေကြီးကို ပြည့်စေကြသည်။ သို့သော် ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ပါ။ ပထမတွင် ဘုရားသခင်ကို နာခံရန် ငြင်းဆိုကြသည်။ ဓမ္မသစ်က မိန့် ဆိုထားသကဲ့သို့ "ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။" (ရောမ ၈း ၇ ) ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည်မှာ အပြစ်သားတို့၏သဘောသဘာ၀ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ကွဲပြားပြီး မြေကြီးကို ပြည့်စေရန် ငြင်းဆိုကြသည်။ အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း။
ဟာမ၏သားတစ်ယောက်မှာ ကုရှဖြစ်ပြီး နိယောဒ၏ဖ ခင်လည်းဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၁၀း ၆- ၉ ) နိယောဒသည် မာနကြီးပြီး မကောင်းသောသူဖြစ်သည်။ သူသည် နိူင်ငံကိုတည် ထောင်သည်။ ဗာဗုလုန်ကို အုပ်စိုးသည်။ နိယောဒဘုရင်နှင့် လူတို့သည် မြေကြီးကို ပြည့်စေရန် လစ်လျူရှုကြသည်။ သူတို့က "လာကြ၊ မြေကြီးတပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားမည်ကို စိုးရိမ်၍၊ မြို့ကို၎င်း၊ မိုးကောင်းကင် မှီရသော ရဲတိုက်ကို၎င်း တည်လုပ်သဖြင့် ကျော်စောကိတ္တိရှိစေခြင်း ငှါ ပြုကြကုန်အံ့" ဟု ဆိုကြသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၁၁း ၄ ) သူတို့သည် ကွဲပြားလိုစိတ်မရှိကြပါ။ သူတို့က မြို့ကို၎င်း၊ ရဲတိုက်ကို၎င်း၊ မိမိတို့ဘုန်းကို ပြသမည့်တန်ခိုးရှိရာအရပ်ကို တည် ဆောက်လိုကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို စီရင်တော်မူသည်။ သူတို့အား ရဲတိုက်ကို မတည်ဆောက် စေတော့ပါ။ "မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် ဘာသာတမျိုးတည်း၊ စကားတမျိုးတည်းရှိကြ သည်။" (ကမ္ဘာဦး ၁၁း ၁ ) ဘုရားသခင်က ဤသို့မိန့်တော်မူသည်။
"လာကြ။ ဆင်းသက်ကြကုန်အံ့။ သူတို့သည် အချင်းချင်းနားမလည် စေခြင်းငှါ၊ သူတို့စကားကို ရှုပ်ထွေးကြကုန်အံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို မြေကြီးတပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ် ကွဲပြားစေတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့သည် မြို့ကိုမတည်ဘဲ နေကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ထိုမြို့၌ ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏ စကားကို ရှုပ်ထွေး၍၊ သူတို့ကို မြေကြီးတပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲ ပြားစေတော်မူသောကြောင့်၊ ထိုမြို့သည် ဗာဗုလုန်မြို့ဟူ၍တွင် သတည်း။"( (ကမ္ဘာဦး ၁၁း ၇- ၉ ) )
ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့၏စကားကို ရှုပ်ထွေးစေတော်မူသည်။ နာမည်မှာ "ဗာဗုလုန်" ဖြစ်ပြီး "ရှုပ်ထွေးခြင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ လူတို့သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦးနားမလည်နိူင်ကြ။ လူတိုင်း သည် မိမိအဖွဲ့ကိုသာ စကားပြောနိူင်ကြသည်။ သူတို့သည် ရဲတိုက်ကို မတည်ဆောက်နိူင်ကြ။ သူတို့အဖွဲအစည်းသည် သီးခြားစီဖြစ်သွားကြသည်။ လူတိုင်းသည် သူတို့နှင့်စကားပြောနိူင် သောအသိုင်းအဝ်ိုင်းဖြင့် သီးခြားစီနေထိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် တွန်း အားပေးခံလာရသောအခါ မြေကြီးကို ပြည့်လာစေကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုနေ့ရက်တွင် "မြေကြီးကို ပိုင်းခြားထားသည်" ဟု ဆိုသည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၁၀း ၂၅ )
ဤသည်မှာ ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက် နှစ်တစ်ရာတွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ လူ သားမျိုးနွယ်တို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း စာက "လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတသွေးတည်းနှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊" (တမန် ၁၇း ၂၆ ) ဟု မိန့်တော် မူသည်။ သို့သောကြောင့် လူတိုင်းသည် မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆို လက်ထပ်ပြီး ကလေး များမွေးဖွါးလာနိူင်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်စု၏ဇီ၀ဗေဒကိုဖော်ထုတ်ရသော် နောဧနှင့်မိသားစု တွင် ဆက်လက်တည်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လူတို့သည် အဖွဲ့ငယ်အသီးသီးဖြင့် ကွဲပြားလာသည်။ အကြောင်းမှာ ရာပေါင်းများစွာသောနှစ် များတွင် မိမိတို့အုပ်စုထဲက လူတို့ကိုသာ လက်ထပ်ကြသည်။ လူတစ်ဦးကိုချထားသော် အခြား သူတစ်မျိုးနှင့်မတူညီပါ။ ဤသည်မှာ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာစကားခြားနှင့် လူမျိုးနွယ်စုခြားလာရာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့တို့သည် ဥရောပဘက်သို့သွားကြပြီး မိမိတို့စကားကို ထိုအရပ်တွင်ပြောကြ သည်။ အချို့တို့သည် အာဖရိကသို့သွားကြသည်။ အချို့က တရုတ်ပြည်ဘက်သို့သွားပြီး တရုတ်စကားဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးပြောကြသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်သည် တိုတောင်းသောအချိန်ကာလတွင်သာ ဖြစ်ပျက်သည်။ ဤဘာ သာစကားအုပ်စုသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် နှံ့ပျံ့လာသည်။ ယာဖက်၏မျိုးဆက်သည် ဥရောပ ၊ အိန္ဒီယ၊ တရုတ်၊ နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန်ဘက်သို့လည်းကောင်း သွားခဲ့ကြသည်။ ဟာမ ၏မျိုးဆက်သည် အာဖရိကဘက်သို့လည်းကောင်း သွားခဲ့ကြသည်။ ရှေမ၏အမျိုးက အရှေ့အ လယ်ပိုင်းတွင် ပြည့်စေကြပါသည်။
ဘယ်နေရာသွားကြသွားကြ လူတို့သည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို သတိရကြသည်။ သို့ဖြင့် မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသောလူမျိုးတိုင်းက ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်း ဒဏ္ဍာရီရှိခဲ့ကြသည်။ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ အမေရိကန်လူမျိုးများက သင်္ဘောတည်ဆောက်သောသူအကြောင်း ကိုပြောလေ့ရှိကြသည်။ ဖီဂျီကျွန်းရှိလူများက ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းဒဏ္ဍာရီရှိခဲ့ကြပါသည်။
ဘယ်နေရာပဲသွားကြသွားကြ သူတို့သည် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းကိုသာ ယုံကြည် ကြသည်။ သူတို့က ဤအရာကို နောဧနှင့်၎င်း၏သားများထံမှသင်ယူလေ့လာခဲ့ရသည်။ မြောက်အမေရိကသားတို့က ဝိညာဉ်ကြီးဟုခေါ်ထားသော ဘုရားသခင်ကိုသာယုံကြည်လက်ခံ ကြသည်။ ဥရောပ နှင့် အိန္ဒီယဘာသာစကားအဖြစ်ဦးဆောင်သော ရိုတို-အင်တို-ဥရောပစကား တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် "သိုင်ယပ်စ်-ပတ်တာ"၊ "ခမည်းတော်ဘုရား"၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသော ဘုရားသခင်ကို ကြားသိခဲ့ကြရသည်။ သိုင်းယပ်-ပတ်တာမှ ဂရိဘုရားဇေရနှင့်ရောမဘုရားဂျူဗိ တာအမည်များဆင်းသက်လာသည်။
Tengri ရှိ လူစဉ်မမှီသောသူများက ကောင်းကင်-ဘုရားကြီးသည် ဖမည်းတော်ဘုရား ထံတော်ပါးက ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ရှေးခေတ်တရုတ်များက တစ်ဆူတည်း သောဘုရားကို ယုံကြည်ကြသည်။ ဒေါက်တာ James Legge (1815-1897) သည် တရုတ် ဘာသာစကားနှင့်စာပေအကြောင်းကို အော့စ်ဖို့တက္ကသိုလ်တွင် သင်ပေးသောသူဖြစ်သည်။ သူရေးသားထားသော The Religions of China (Charles Scribnes's Sons, ၁၈၈၁ ) စာအုပ်တွင် ဒေါက်တာ Legge က တရုတ်တို့၏ မူလယုံကြည်ချက်မှာ ဆန်တီ ( ကောင်းကင် ဘုရင် ) တည်းဟူသော တစ်ဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်မတိုင်မှီ နှစ်ပေါင်းနှစ် ထောင်တွင် ကွန်ဖြူးရှပ်မတိုင်မှီ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့် ဗုဒ္ဓမဖွေးဖွါးမှီကာလတွင် တရုတ်လူမျိုး များသည် တစ်ဆူတည်းသောဘုရား၊ ခမည်းတော်ဘုရား၊ ကောင်းကင်ဘုံး၏ဘုရင်ကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
တရုတ်ပြည်၏မူလကိုးကွယ်သောဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်။ ဗုဒ္ဓသည် တရုတ်လူ မျိုးမဟုတ်။ အိန္ဒီယတွင်သာ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသညကို အိန္ဒီယပြည်မှာ တရုတ်ပြည် သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ပြည်၏ကနဦးယုံကြည်ချက်မှာ ဘုရားတစ်ဆူတည်း၊ ဘု ရားသခင်တပါးတည်း၊ ဆိန်တီဟူခေါ်သော ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်သာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း တွင် အယူသည်းမှုများ၊ မှားယွင်းသောအရာများကို ထည့်ပေါင်းလာကြသည်။ သို့သော် ဆိန်တီဟူသော ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်သည် တရုတ်လူမျိုးများ၏မူလဘုရားဖြစ်သည်။ "ငါ့ဝိ ညာဉ်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ကို ချီးမွမ်းပါ။" အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြပါစို့။
တရုတ်လူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ထံပါးက အဘယ့်ကြောင့် ထွက်သွားကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိလူအား လုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြပါသည်။ နေရာတိုင်းရှိ ရှေးလူတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြပါ သည်။ သူတို့သည် "ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။" ( ရောမ ၈း ၇ ) ဘုရားသခင်ကို အလိုမရှိကြ။ ထို့ကြောင့် အယူသည်းမှာများနှင့် ရုပ်တုများ၊ နှင့် မှားယွင်းသော ဘာသာတရား များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
" အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျက်ပင်၊ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော် ကိုလည်းမသိမမှတ်၊ အချည်းနှီတွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသောစိတ်နှ လုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ပညာရှိယောင်ဆောင်လျက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍၊ မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိူင်သော ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ် သောလူ၏ရုပ်တု၊ သားငှက်အစရှိသော တွားတတ်သောတိရိစ္ဆာန် ၏ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင်၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ "( ရောမ ၁း ၂၁- ၂၃ ) )
ဤအရာများသည် လူသားမျိုးနွယ်များအပေါ်တွင် သက်ရောက်လေ့ရှိပါသည်။ အီဂျစ်ပြည်၊ ဗာ ဗုလုန်ပြည်၊ ဥရောပနှင့်အီန္ဒီယပြည်၊ တရုတ်ပြည်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ မြေကြီးပေါ်ရှိ မှားယွင်းသောဘာသာတရားလာရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သော လူတို့သည် သမ္မာတရားကို ငြင်းပယ်ပြီး လိမ်လည်လှည့်စားမှုများကို လက်ခံခဲ့ကြသည်။ အလင်းသည် တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာသည်။ အမှောင်လွှမ်းလာသည်။ လူတို့သည်လည်း မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှာဖွေသောသူသည် ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခါလဒဲပြည်၏ဥရမြို့ဟုခေါ်သော အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သည့် မြို့ကို ကြည့်ရှုတော်မူသည်။ ထိုအ ရပ်က အာဗြဟံဟုခေါ်သောသူအား "ထာဝရဘုရားသည် အာဗြဟံကို ခေါ်တော်မူ၍၊ သင်၏ ပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါင်ဘော်များထဲက ထွက်ပြီးလျှင်၊ ငါပြလတံ့သောပြည်သို့သွား လော့။ ငါသည် သင့်ကို လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ငါခေါင်းကြီးပေး၍ သင်၏နာမကို ကြီးမြတ်စေ မည်။……..သင်သည် ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။….သင့်အားဖြင့် လူမျိုးအပေါင်းတို့ သည် ခေါင်းကြီးခံရကြလိမ့်မည်" (ကမ္ဘာဦး ၁၂း ၁ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့ အား "သင့်ကို ငါခေါ်တော်မူသည်" ဟု မိန့်တော်မူသည်။ အာဗြဟံသည် စစ်မှန်သောဘုရားကို ခေါ်တော်မူသည်။ သူသည် ယုဒလူမျိုး၊ မြေကြီးပေါ်တွင် ရွေးချယ်ခံလူမျိုး၏အဘဖြစ်လာသည်။
ဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကိုပေးရန် ယုဒလူမျိုးများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ သားတော်ယေရှုကိုလည်း ယုဒမိန်းကလေးမှ ဖွါးမြင်ရန် စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ယုဒလူမျိုး များကြားတွင် ကြီးထွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် ယုဒနယ်တွင် လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် အသွေးသွန်းတော်မူခဲ့ သည်။ အသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုသည် လူသားအားလုံးအ တွက် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယုဒလူမျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်၊ တရုတ်လူမျိုးများ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူသားအားလုံးအတွက် ကြွလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် "ဤလော ကတစ်ခုလုံး၏အပြစ်အတွက် ….. ရန်ကိုငြိမ်းစေသောသူဖြစ်သည်။" ( ၁ယော ၂း ၂ ) ခရစ် ယာန်ဘာသာဟူသည်မှာ လူသားအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သောဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ "အမေရိကန်ဘာသာရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။"အမေရိကန်လူမျိုးအများစုသည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များမဟုတ်ကြပါ။ ခရစ်တော်သည် လူတစ်မျိုးအတွက်မဟုတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု တည်းအတွက်လည်းမဟုတ်။ ကမ္ဘာ့နိူင်ငံတိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်များရှိကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည် "တလောကလုံး၏အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။"တရုတ်လူမျိုးများ၊ ကိုးရီးယားလူမျိုးများ၊ ဟစ်ပင်နစ်လူမျိုးများ၊ အာဖရိကလူမျိုးများ၊ နှင့် သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် အသေခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်ရှိလူများနှင့်တကမ္ဘာလုံးရှိလူများသည် ခရစ်တော်ကို ကိုးစားယုံကြည်ကြသည်။ ယေရှုက သင့်အား "ငါ့ထံသ်ုိ႔လာကြလော့" ဟု မိန့်မူခဲ့သည်။ ( မဿဲ ၁၁း ၂၈ ) ခရစ်တော်ထံသို့လာပါ။ သူ့ကို ကိုးစားပါ။
လူသည် ဘုရားသခင်ကို မိမိကိုယ်ပိုင်အဖြစ်တွေ့မြင်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေပြီးတွေ့နိူင်သလား။ ( ယောဘ ၁၁း ၇ ) အဘယ်သူမျှ ဘုရား သခင်ကို မတွေ့လိုကြပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက "ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ" ဟု ဆိုပါသည်။ (ရောမ ၃း ၁၁ )အပြစ်သားများကို ရှာဖွေပြီး ကယ်တင်သောသူသည် ဘုရားသခင္သာဖြစ် သည်။
လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မမူမှီ ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသောသူများ အား ကယ်တင်ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အပြစ်သားများအတွက် အသေခံရန် သားတော် ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်မည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ က ယေရှုအကြောင်းကို ပြောထားပါသည်။ "ကမ္ဘာမတည်မှကတည်းက အသေခံတော်မူသော သိုးသူငယ်" ဟူ၍ဖြစ်သတည်း။ (ဗျာဒိတ် ၁၃း ၈ ) ဤသည်မှာ နေရာတိုင်းတွင်ရှိသောသူများ အတွက် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်သောငှါ လူ တိုင်းအတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက "ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်အသေခံ တော်မူသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့် တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏" ဟု လာသတည်း။ ( ရောမ ၅း ၈ ) သမ္မာကျမ်း စာက "ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍၊ ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏" ( ၁ယော ၄း ၁၀ ) ဟု ဆိုသည်။ ယေရှုသည် သင့်အား အလွန်ပင်ချစ် တော်မူ၍ သင်၏အပြစ်ကြွေးအတွက်ပေးဆပ်ရန် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှု သည် သင်၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် အသွေးကို သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ယေရှုကို အလျှင်အမြန် အားကိုးယုံကြည်ရန် ဆုတောင်းပါ၏။
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး "ငါ့ဝိညာဉ်၊ ကောင်းကင်ဘုရင်ကို ချီးမွမ်းပါ။" ကို သီဆိုကြပါစို့။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရောမ ၁း ၂၁- ၂၃
"ယေရှုစိုးစံမည်"၊ (Dr. Isaac Watts ၊ ၁၆၇၄-၁၇၄၈) ရေးစပ်သည်။